စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းများ - သံအမတ်နှင့်ဖန်ဆင်းရှင်ခေတ်မြင့်တက်လာခြင်း Martech Zone
၂၀၂၀ တွင်စားသုံးသူများ၏ဘဝတွင်လူမှုမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္mediaကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်အသက်သွေးကြောတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအလိုအလျောက်စီစဉ်ထားသည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်မိတ်ဆုံပွဲများအတွက်အချက်အချာဖြစ်လာသည်။
ထိုပြောင်းလဲမှုများသည် ၂၀၂၁ နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ္ဘာကိုပုံသွင်းမည့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတွက်အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သံတမန်များ၏စွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်၏ခေတ်သစ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ သင်၏တန်ဖိုးမြင့်မားသောထောက်ခံသူများ၊ ပရိသတ်များနှင့်နောက်လိုက်များအားသင်၏အမှတ်တံဆိပ်အတွက်စစ်မှန်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်သည်ကိုသိရှိနိုင်ရန်ဆက်လက်လေ့လာပါ။
Trend 1: စစ်မှန်သောအကြောင်းအရာစတူဒီယို - ထုတ်လုပ်အကြောင်းအရာ Beats
ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စျေးကွက်၏ဗဟိုဖြစ်လာသည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ပါ ၀ င်မှု၊ သုံးစွဲသူများကိုအထူးသဖြင့်ဘယ်အချိန်မှာရောက်ရှိနေသလဲ ကြော်ငြာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ.
Greenfly တွင်ဤစစ်မှန်မှု - ပထမဆုံးချဉ်းကပ်ပုံသည်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပလက်ဖောင်းများတွင်မည်မျှကောင်းမွန်စွာပြောင်းလဲသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ Biden for President မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည်သူတို့၏အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုများတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်ရိုးရာနိုင်ငံရေးကြော်ငြာများ - ပညာရှင်ဆန်သောထုတ်လုပ်မှု၊ စက္ကန့် ၃၀ စက္ကန့်ပို့သောပို့စ်များသည်မဲဆန္ဒရှင်များမှ၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ကင်မရာများကိုဝေမျှရန်ခလုတ်ခတ်ထားခြင်းထက်ထိရောက်မှုပိုနည်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် မဲပေးမှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှု။
ဒီမိုကရက်တစ်အမျိုးသားကော်မတီသည်သူတို့၏သမ္မတဟောင်းများနှင့်အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းအပါအ ၀ င်သူတို့၏ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သူများအတွက်လမ်းညွှန်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုရေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းများမှထုတ်လွှင့်ရန်အလှည့်အပြောင်းများသို့လှည့်ခဲ့သည်။ မဲဆန္ဒရှင်တွေ ၎င်း၏များအတွက် Barack Obama ငါမဲပေးမည် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။
သင်၏မဲသည်ယခုအချိန်တွင်ပြုလုပ်သည်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
ဒီနေ့အမျိုးသားမဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ သွားပါ https://t.co/XdZz4dh82T မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်မဲပေးရန်စီစဉ်ရန်။ ပြီးတော့သင်သိတဲ့လူတိုင်းလည်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ pic.twitter.com/ItarX1d4zw
- ဘရက်ခ်အိုဘားမား (@BarackObama) စက်တင်ဘာလ 22, 2020
စစ်မှန်သောပါဝင်မှုသည်စားသုံးသူအဆင့်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြံ့ခိုင်ရေးဂိမ်းမှာလူမှုရေးအသင်း ငါ Kickboxing ကိုချစ် မြောက်အမေရိကတလွှား၎င်းတို့၏စတူဒီယိုမန်နေဂျာ ၁၀၀ ကျော်၏မှတ်တမ်းများကိုကောက်ယူခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောဒေသတွင်းစျေးကွက် COVID-19 အခြေအနေများကိုတုံ့ပြန်ရန်သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုလန်းဆန်းစေပြီးခွဲခြားနိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ SailGP ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများမှဖမ်းယူထားသောအကြောင်းအရာများကိုဝေမျှရန်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိရွက်လွှင့်အဖွဲ့အားကစားသမားများကိုအောင်မြင်စွာထိပုတ်ခဲ့သည်။
SailGP (@sailgp) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
Trend 2: ပရိသတ်များနောက်လိုက်မဟုတ် - သူတို့သည်သင်၏ဖန်တီးမှုအဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်
ပရိသတ်တွေဖြစ်လာနေပြီ အရည်အသွေးဖန်တီးသူ (အချို့ကျော်ပိုနှစ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်း သြဇာ) သူတို့ကိုယ်သူတို့။ အချို့ပေမယ့် အသုံးပြုသူ - ထုတ်လုပ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းများကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကကြိုးကိုင်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ လူများ၏အတွေ့အကြုံအစစ်အမှန်များကိုခေါ်ဆိုခြင်းထက်ထုတ်ကုန်ကိုမြှင့်တင်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမရှိပါ။
ကူးစက်ရောဂါ၏အလယ်တွင်, ticker- တိပ်ချီတက်ပွဲထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတူ, အ Los Angeles မြို့ Dodgers MLB ကမ္ဘာ့ဖလားစီးရီးချန်ပီယံကိုပွဲကျင်းပရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကလပ်၏ဒီဂျစ်တယ်အဖွဲ့သည်ပရိသတ် ၃,၅၀၀ ကျော်အားစုစည်းပြီးလူမှုရေးမီဒီယာဗွီဒီယိုပြခန်းသို့ပြုစုခဲ့သော Greenfly မှတစ်ဆင့်သူတို့၏ချန်ပီယံဖြစ်ချိန်တုံ့ပြန်မှုဗီဒီယိုများကိုတင်ပြရန်စုရုံးခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့ကျင်းပခဲ့သည်။ ငါတို့ငိုခဲ့တယ် ငါတို့နိုင်ခဲ့တယ်။ #အတူတူ pic.twitter.com/U3nLivNz7K
- Los Angeles Dodgers (@Dodgers) နိုဝင်ဘာလ 12, 2020
ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုသည်အဖွဲ့သည်ထိုပွဲတော်၏ပန်ကာတုံ့ပြန်မှုများ၏စွမ်းအားအားလုံးကိုအဝေးမှဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရရှိမှုတွင်သူတို့၏စိတ်အားထက်သန်စွာထောက်ခံအားပေးသူများပါ ၀ င်သည်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်း ၃။ လူမှုမီဒီယာသည်မိတ်ဖက်တန်ဖိုးကိုကြီးထွားစေရန်အသစ်စက်စက်ဖြစ်သည်
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားပိတ်ဆို့မှုများနှင့်နယ်စပ်ဒေသများရှိဒစ်ဂျစ်တယ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူလူမှုရေးသည်မိတ်ဖက် ROI ကိုသရုပ်ပြရန်နှင့်ဝင်ငွေကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်အလွန်အရေးပါလာခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းများထဲတွင်အများဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည် စပွန်ဆာကိုသက်ဝင် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း။
မိတ်ဖက်များသည်သူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြန်လည်ရရှိကြောင်းသက်သေပြရန်နှင့်လူမှုမီဒီယာများကသူတို့၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့ကူညီပေးနေသည်ကိုပိုမိုမြင်သာစေရန်ပိုမိုတောင်းဆိုလာကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းများသည်ဤတန်ဖိုးကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း၊ ရောင်းအားအသစ်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိပညာတိုးခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်များတိုးမြှင့်ခြင်းတို့တွင်ရှာဖွေနေကြသည်။
မကြာသေးမီကအားကစားစီးပွားရေးဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Major League Baseball ၏အဓိကအပိုင်းငါးပိုင်း၊ Gatorade မှတင်ဆက်သည် Pete Alonso နှင့်အတူပထမ အားကစားအဖျော်ယမကာအမှတ်တံဆိပ်ကိုဘေ့စ်ဘောပရိသတ်များနှင့်လိဂ်၏ပုံမှန်နည်းလမ်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် ယူကျု့ချန်နယ်.
စပွန်ဆာတန်ဖိုးသည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောလူမှုရေးပြောင်းလဲမှုကိုမောင်းနှင်ရန်အတွက်ထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်သည်။ Rajasthan Royals ခရစ်ကက်အဖွဲ့သည်အဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည် NIINE သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး အချိန်ကာလနှင့်ဆက်စပ်သောအစစ်အမှန်အမည်းစက်ရှိသည့်အိန္ဒိယတွင်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက IPL ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း, ကိုး ဦး ရမှတ်တိုင်းပြေးဆွဲရန်အတွက်သုံးလကြာသန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါများကိုမိန်းကလေးကိုး ဦး အားကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းပြေးနှုန်း ၁၈၆ ခုနှင့်မိန်းကလေး ၁,၆၇၄ ဦး ရှိသည်။
နီနီ (@niineindia) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
စစ်မှန်မှု၊ ထောက်ခံမှုနှင့်ကုန်ကြမ်းများသည်အတင်းအဓမ္မကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြော်ငြာများကိုအမြဲတမ်းကျော်လွှားသွားလိမ့်မည်။ ပန်ကာမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာများကိုတောင်းခံခြင်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ကြော်ငြာကြော်ငြာများမှတစ်ဆင့်ဖြတ်တောက်နိုင်သောအစွမ်းထက်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သူတို့ဟာမိတ်ဖက်တွေကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကြားမှာထင်ရှားပြီး ၀ င်ငွေမှာဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်မယ်။
Tags: ကြော်ငြာသံအမတ်ကြီးစစ်မှန် contnetစစ်မှန်ဘားရက်အိုဘားမား။ကိုဗစ် -19ဖန်တီးသူခရစ်ကက်အသင်းဒီမိုကရေစီအမျိုးသားကော်မတီdncအတည်ပြုခြင်းပန်ကာ - ထုတ်လုပ်ပြီးအကြောင်းအရာပရိတ်သတ်တွေနောက်လိုက်gatoradeအစိမ်းရောင်ငါ kickboxing ကိုချစ်ငါမဲပေးလိမ့်မယ်instagramLos Angeles က dodgersအဓိကလိဂ်ဘေ့စ်ဘောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေတ်ရေစီးကြောင်းMLBနိုင်းPete alonso နှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးပေါ်မှာRajasthan တော်ဝင်ရွက်သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါလူမှုမီဒီယာပံ့ပိုးကူညီခြင်းကိုအားကစားစီးပွားရေးဂျာနယ်တွစ်တာအသုံးပြုသူ-generated content တွေကိုyoutube ကယူကျု့ချန်နယ်
Tom Kuhr သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ၀ င်ငွေလည်ပတ်မှုနှင့်လူမှုမီဒီယာများတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည့်မဟာဗျူဟာမြောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှုဆောင်ဖြစ်သည်။ သူသည်အောင်မြင်သောစတင်မှုများစွာ၏ဝါရင့်ဖြစ်ပြီးအရင်းအနှီးကိုမြှင့်တင်ရန်၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအသင်းများကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သောအရွယ်အစားကြီးမားသည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ များအတွက် CMO အဖြစ် အစိမ်းရောင်သူသည်အားကစား၊ မီဒီယာ၊ စားသုံးသူကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အစွမ်းထက်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များကိုအလိုအလျောက်ချဲ့ထွင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီများနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဖောက်သည်များ၏စကားသံကိုကိုယ်စားပြုသော Tom ၏ဆုရထုတ်ကုန်များနှင့်ထူးခြားသောဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံများသည် IPO နှင့်ဝယ်ယူခြင်းမှအောင်မြင်သောထွက်ပေါက်များစွာကိုရရှိခဲ့သည်။